जुलाई - खरबूजा समय। वयस्क र छोराछोरी दुवै हतारमा यो मीठो र सुगन्धित जामुन आनन्द लिनुहोस्। यो फल को रसदार कोमल शरीर को तातो मौसममा quencher सबै भन्दा राम्रो तिर्खा छ। हामी तरबूज खान र तथ्यलाई विचार छैन स्वाद र स्वाद आफ्नो फाइदा मात्र व्यक्तिहरूलाई छैनन् भनेर। तपाईं उत्पादन को रासायनिक संरचना जाँच्न भने, यो यसको प्रयोग केही रोगहरु को उपचार मा गर्न मद्दत निष्कर्षमा गर्न सकिन्छ। किनभने यो भिटामिन ए को उच्च मात्रा समावेश, पीपी, सी, समूह बी र अत्यावश्यक सूक्ष्म पोषकतत्व (फस्फोरस, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, पोटासियम)। शरीरका रातो रंग हाम्रो शरीर मा एक लाभदायक प्रभाव छ जो पदार्थ lycopene, को उपस्थितिको कारण हो। यो तत्व विरोधी क्यान्सर लागूऔषधको निर्माणमा प्रयोग गरिएको छ भन्ने तथ्यलाई उल्लेख गर्न यो Suffice। यो चमत्कार फल मात्र भित्र तर पनि बाहिर उपयोगी छ प्रयोग गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, खरबुजा को एक अनुहार मास्क महिला छाला आफ्नो समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्न सक्षम छन्। यस्तो मायालु हालतमा बनाउनको लागि धेरै विकल्प विचार गर्नुहोस्।
शास्त्रीय खरबुजा मास्क
यो अद्भुत फल शरीरका धेरै, रसदार पानी जस्तो छ। अत्यन्तै कठिन को अनुहार मा प्रयोगको लागि यो बाहिर कुक porridge - यो रस धेरै बाहिर खडा। त्यसैले खरबुजा को अनुहार मास्क को छाला लागू विशेष तरिका आवश्यक छ। यो: 4-5 तहहरू मा तह, सफा gauze ले, आँखा र नाक, हाम्रो जामुन को नम रस लागि slits बनाउन र अनुहार मा राखे। 15-20 मिनेट हुनुपर्छ मुखौटा राख्नुहोस्। कि पछि, को gauze हटाउन पानी संग आफ्नो अनुहार कुल्ला र हामीलाई कुनै पनि उपयुक्त पोसिलो क्रीम गराउँछ। यो मास्क राम्रो छ छाला रिफ्रेस, यो टन र उमेर-सम्बन्धित परिवर्तनहरू को उपस्थिति रोक्छ।
खरबुजा बरफ - सबै भन्दा राम्रो उपाय edema लागि
हामी सबै रात हिंडे र बिहान संग, भाँचिएको उठे तेज अनुहार? यो आफैलाई आकार मा राख्न समय! अतिरिक्त तरल पदार्थ को शरीर हटाउन, यो पाकेको खरबुजा कोमल को एक टुकडा खान सम्भव छ। बाह्य को सुनिंनु हटाउन केले मदत गर्नेछ? निस्सन्देह, चिसो खरबुजा को मास्क! यो धेरै सरल बनाउँछ। को मोल्ड यो फल को मज्जा पूर्व-स्थिर र बिहान, बरफ खरबुजा हटाउन र आफ्नो अनुहार RUB। 20-25 मिनेट पर्खनुहोस् र सुन्दर पानी संग छाला कुल्ला। सुनिंनु द्वारा र आँखा अन्तर्गत बैग गएको थियो!
छाला बुढ्यौली लड्न
तपाईं पहिलो झुर्रियाँ नोटिस? एक जरुरी आफ्नो परिसमापन प्रक्रिया गर्न आवश्यक छ। यो हामीलाई मदत घर अनुहार मास्क, विरोधी-बुढ्यौली गुण पुरातन समयका देखि ज्ञात गरिएको छ। तिनीहरूलाई एक को तयारी को लागि, हामी एक पाकेको खरबुजा को रसदार मज्जा, एक सानो तरल मह र अभोकाडो रस को एक चम्मच आवश्यक छ। सबै सामाग्री मिश्रण र 20 मिनेट को लागि अनुहार मा लागू हुन्छ। एक समय पछि हामी बन्द मास्क धुन र पोसिलो क्रीम राखे।
सूर्य मा जलाए? खरबुजा को शरीर मदत
घाम समुद्र तट गर्न जोखिम पछि छाला कसरी soothe गर्न? यो सबै एउटै फल मद्दत गर्छ। खरबुजा र ककडी देखि अनुहार मास्क पूर्ण सानातिना बल्न सामना र जलन हटाउन छ। यो प्राचीन चिनियाँ Sages द्वारा खरबुजा प्रयोग बलियो क्षरण र घाउ festering को उपचार अन्तर्गत टिप्पण लायक छ। निम्नानुसार एक मास्क बनाउन: 1 को एक अनुपात मा खरबुजा र ककडी को शरीर मिश्रण: 1 र छाला लागू। आधा एक घण्टा पकड र पानी संग आफ्नो अनुहार धुनुपर्छ।
हामी घर मा खरबुजा को एक अनुहार मास्क तयार गर्न सम्भव छ के विचार र तिनीहरूले छाला ताजा गर्न मात्र होइन, तर पनि हल्का बल्न संग, उदाहरणका लागि, यो उपचार गर्न सक्षम छन् कि पाएका छन्।
कफी साफ सेल्युलाईट: समीक्षा र परिणाम
हात रोलर मालिश सेल्युलाईट: समीक्षा
को चाक र जांघों विरोधी सेल्युलाईट मालिश: प्रक्रिया, दक्षता, र समीक्षा विवरण
कसरी अनुहार मा blackheads छुटकारा गर्न
भूगोल, प्राकृतिक सुविधा र चेक गणतन्त्र क्षेत्र। देश बारेमा रोचक तथ्य
दुर्गन्ध «ड्राई ड्राई»: समीक्षा र सिफारिसहरू
किन "वारफाइस" सुरु हुँदैन: कारणहरू र समाधानहरू
आईफोन कस्तो भिडियो स्वरूप समर्थित छन्: प्रभावशाली सुविधाहरू
शुरुआती लागि Bodyflex - स्लिमिङ कला
भोजनालय "पिर" (कजान): मेनु, वर्णन
आहार 2468. प्रभावकारी वजन विधि वा आफ्नो स्वास्थ्य कमजोर बनाउन एक तरिका?
यो श्रृंखला "सरगना पीटर्सबर्ग": एंटीबायोटिक। "सरगना पीटर्सबर्ग: एंटीबायोटिक को पतन"
रूसी संघ को सैन्य सिद्धान्त: मुख्य प्रावधान
गृह लागि एयर purifiers: कसरी चयन गर्ने? दर्जा र ग्राहक समीक्षा